Erdogan oo ku hanjabay in Turkiga uu joojin doono isticmaalka doolarka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Erdogan oo ku hanjabay in Turkiga uu joojin doono isticmaalka doolarka
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray inuu dhagaha ka fureysanayo handadaadda uga imaanaysa Mareykanka ee ku saasban xariga baadari ameerikaan ah oo Turkigu u haysto eedo la xiriira argagixisanimo.
Erdogan ayaa Mareykanka u shhegay iaanu diyaar u ahyn inuu ku ganacsado lacagta doolar ah Dowlada Turkiguna fulin doonto balan qaadkaas .
Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweyne Trump uu laba jibaaray canshuurta la saarayo birta iyo naxaasta Turkiga uu u dhoofiyo Mareykanka.
Madaxweyne Erdogan oo la hadlayay boqolaal qof oo isugu soo baxay magaalada Unye ee Waqooyi bari Turkiga ayuu u sheegay in ay khalad tahay in baadari dartii Turkiga jilbaha dhulka loo dhigo waxaana uu sheegay inaanay arintaa cidna ka yeeli doonin.
Waxa uuna intaasi ku daray in dalkiisa uu diyaar u yahay in baayacmushtarigiisu uu ku saleeyo lacag aan doolar ahayn uuna la baayacmushtaro dalal ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka,Iiraan iyo Ukraine.
Dad badan oo Turki ah ayay durba saameysay hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi ee liiraha, waxaana dad deggan magaalada Istanbul ay BBC-da u sheegeen in xaalad xun ay ku jirta lacagta dalkaasi Turkiga .